"Illaa Heer Dhimasho Ayaan La Dagaallami Doonaa Real Madrid" - Sergio Ramos Oo Sheegay In Aanu Arxan U Geli Doonin Kooxdiisii Hore - Laacib
HomeWararka Champions League“Illaa Heer Dhimasho Ayaan La Dagaallami Doonaa Real Madrid” – Sergio Ramos Oo Sheegay In Aanu Arxan U Geli Doonin Kooxdiisii Hore
“Illaa Heer Dhimasho Ayaan La Dagaallami Doonaa Real Madrid” – Sergio Ramos Oo Sheegay In Aanu Arxan U Geli Doonin Kooxdiisii Hore
December 14, 2021 Abdiwahab Ahmed
Kabtankii hore ee Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa ku laaban doona Santiago Bernabeu oo uu kaga hor tegi doono kooxdiisa hore, kaddib markii ay wareegga 16ka Champions League isku dhaceen Real Madrid iyo PSG.
Ramos ayaa sheegay in aanu wax arxan ah u geli doonin kooxdiisa hore ee Real Madrid oo uu dagaal illaa heer dhimasho ah u geli doono sidii ay u guuleysan lahayd Paris Saint-Germain, hase yeeshee waxa uu dhinaca kale xusay in uu jeclaan lahaa in ay kala badbaadaan Madrid oo aanay iska hor iman.
Warbaahinta ayuu la hadlay isku-aadka kaddib, waxaanu yidhi: “Markii aan diyaaradda ku imid (xilligii isku aadka ayuu diyaarad saarnaa), waxay ahayd Manchester United kooxda aanu ku eegnay, waxaanay ahayd koox aan jeclaa in aanu la ciyaarno, hase yeeshee wax baa isbeddelay.
“Waxa aan jeclaan lahaa in aanaan isku dhicin Real Madrid, laakiin ku laabashadayda Estadio Santiago Bernabeu farxad ayay ii tahay. Ma aanan awoodin in sagootin la iigu sameeyo sababtoo ah COVID-19. Waad ogtihiin sida aan u jecelahay Real Madrid, mana doonayn in aanu la ciyaarno.
“Hadda se, waxa aan difaacayaa PSG oo aan wax walba u samayn doono sidii aan uga caawin lahaa inay soo gudubto. Waa koox khamaar igu qaadatay, aniguna waxa aan u dagaallami doonaa illaa heer dhimasho.”
Sergio Ramos waxa uu amaan u jeediyey difaaca Real Madrid ee xilli ciyaareedkan bandhigga fiican samaynaya iyo da’yarka reer Brazil ee Vinicius Junior, waxaanu yidhi: “Vinicius waa ciyaartoy cajiib ah oo soo baxaya, laakiin mar horeba is muujiyey.
“Waan ku faraxsanahay sababtoo ah waan la hadli jiray. Ma garaanayo haddii uu awoodi doono inuu la ciyaaro Kylian Mbappe, sababtoo ah qofna ma garanayo waxa dhici doona [suuqa iibka xagaaga oo la filayo in Mbappe ka tago PSG].
“Real Madrid si fiican ayay u shaqaynaysaa. Heerka difaacooduna wuu sarreeyaa. Way u fiican tahay in horyaalka Spain ay hoggaaminayaan.”